Maxamed Saalax oo daaha ka rogay fariin uu Klopp u diray ciyaartoyda Liverpool – Gool FM
(England) 21 Agoosto 2019. Xiddiga reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Maxamed Saalax ayaa daaha ka rogay fariin uu u jeediyay macalinka reer Germany ee Jürgen Klopp ciyaartoyda Reds, kahor inta uusan furmin xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020.
Xili ciyaareedkan cusub ee 2019/2020 ayaa u muuqda mid loolankiisa uu kasii adkaan doono, kii lasoo dhaafay, iyadoo sidoo kale ay Reds dooneyso inay difaacato koobka Champions League, kaddib markii ay ku soo guuleysteen xili ciyaareedkii hore.
Maxamed Saalax ayaa u sheegay Taleefishinka “CNN”:
“Ku dadaal inaad si adag u sii shaqeyso, haddii aad rabto inaad ku guuleysato waxyaabo kale, waa inaad u shaqeysaa si ka xoogan xili ciyaareedkii tagey, waana inaad noqotaa mid dhex-dhexaad ah”.
“Ha xasuusanina wixii dhacay, una dagaalama sida aad ugu guuleysataan, tartamo kale ee cusub”.
Maxamed Saalax ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku sii daray:
“Haddii aad ugu ciyaarto koox sida Liverpool oo kale ah, waxaad heysataa rajo aad u sarreysa waana inaad ku guuleysato wax uun, haddii cadaadiska uusan ka imaanin nafteena, waxay ka imaan doontaa taageerayaasha”.
Solskjear oo Xilka RIGOORE tuurista Man United ka xayuubiyay Paul Pogba.... (Yaa loo dhiibay??)